Mpụga ike draịva dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa gị n'ihi na ihe niile, nke onye ọ bụla n'oge na-eme. Ha bụ n'ụzọ zuru okè na iji hụ na niile nke gị data na-ọma echekwara na ị gaghị ida ọ bụla nke gị faịlụ gị ga-kọmputa okuku. Mpụga draịva na-mfe inwe, ọtụtụ mgbe ha dị na niile bụ isi kọmputa na-echekwa na ha na-eme ihe ole na ole uru. Nke mbụ niile, ha nwere nnukwu omimi otú ị ga-mgbe-enwe nchegbu banyere ohere nchekwa. Ha bụ mfe iji, mgbanwe, na-mfe na-ebu. Ma, mgbe ụfọdụ ha nwere ike ida ụfọdụ nke gị data nke pụrụ ịbụ nnọọ na-akpata nchekasị n'ezie.
E nwere ọtụtụ ihe mere gị mpụga ike mbanye nwere ike hapụ gị data. Otu n'ime ndị kasị nkịtị bụ na ụfọdụ ndị na mmadụ na mberede hichapụ ihe niile nke ha faịlụ. I nwere ike na-formatted na-ezighị ezi mbanye n'amaghị na biri adịkwa niile nke gị data. Ndị ọzọ mgbe ọ bụ ike mbanye onwe ya na ike malfunction na eme ka ị hapụ gị niile faịlụ. Ihe ọ bụla mere ihichapu niile data gị ike mbanye, i nwere ike inwe ya niile azụ ma ọ bụrụ na ọ bụ kpam kpam dekwasịzie ma ọ bụ merụọ.
Olee otú ị pụrụ naghachi faịlụ site na gị mpụga ike mbanye?
Agbake data gị busted mpụga ike mbanye yiri ka ihe fọrọ nke nta-agaghị emeli. Ọ bụrụ na ị nwere Wondershare Data Iweghachite ọ dị mfe dị ka nanị otu click. Wondershare Data Recovery Bụ usoro ihe omume ga-enyere gị naghachi furu efu, formatted, ehichapụ ma ọ bụ rụrụ arụ faịlụ site na draịvụ ike gị dị nnọọ mfe nzọụkwụ. Gịnị bụ ọbụna ihe ọzọ na-akpali akpali bụ na ọ pụrụ inyere gị aka naghachi niile faịlụ na ụdị na nke a software gụnyere videos, music, akwụkwọ na audio faịlụ.
A bụ otú naghachi faịlụ site na draịvụ ike gị iji Wondershare Data Recovery.
Nzọụkwụ otu: The nzọụkwụ mbụ bụ ibudata ma wụnye ihe omume na kọmputa gị. Ị nwere ike ibudata Mac ma ọ bụ Windows Version dabere na gị sistemụ. Ugbu a unu bụ njikere naghachi gị faịlụ.
Nke a bụ window ị ga-ahụ mgbe ị na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery.
Nzọụkwụ 2: I kwesịrị iṅomi gị mpụga mbanye. Iji mee nke a hụ na gị na mpụga mbanye wee họrọ ya na pịa "Malite" ka iṅomi ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data si a formatted mpụga mbanye mgbe ahụ hụ na "Kwado Deep iṅomi" igbe na-enyocha. Nke a bụ ihe ya anya ka.
Nzọụkwụ 3: mgbe ịgụ isiokwu niile faịlụ na a hụrụ ga-egosipụta na nke pụrụ ịkpata window. I nwere ike ikpebi ndị ị chọrọ iji naghachi na mgbe ahụ akara ha. Pịa na naghachi-amalite mgbake usoro.
Ọ dị mkpa iji hụ na ị na-adịghị azọpụta ndị faịlụ na na mpụga mbanye.
Olee otú Zere Data Loss mgbe Iji ihe mpụga ike mbanye
Mgbochi bụ mgbe niile ka mma karịa ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na i nwere ike izere adịkwa gị data na akpa ebe, ị ga-enweghị-aga site nchegbu na obi nkoropụ nke na-abịa e mesịa. Otu n'ime ndị kacha ụzọ iji zere mpụga data ọnwụ bụ ịzụta a ọma mpụga mbanye. Jide n'aka na mbanye ị zụrụ a mere a ziri ezi emeputa na na ị ịzụta ya na a ziri ezi kọmputa ahịa. Ịkpachara anya banyere ịzụ ha online dị ka ị ghara ijide n'aka banyere àgwà ruo mgbe ọ na Ẹnam ekese gị.
Ozugbo i zụtara gị mpụga mbanye, ọ dị mkpa ka ezi na-elekọta ya. Zere inwe ọtụtụ partitions na ya dị ka ha ndị yiri ka dịkwuo loading oge nke nwekwara ike belata ndụ nke mpụga ike mbanye. Ọ dịkwa mkpa na ị Ikwupu ya na kọmputa gị mgbe ojiji. Nke a ga-enyere gị aka belata ufodu ebe i nwere ike mmadụ na mberede Ọkpụkpọ gị mbanye. Egbu ọ dị ezigbo mkpa na mgbe ị chọrọ ịkwaga data si mbanye iṅomi ya kama ịkpụ. Otú a ị ga nwere ndabere bụrụ na nke ọnwụ.
Mpụga ike draịva achọ elekọta otú ị ga-echekwa ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Zere elu okpomọkụ, iru mmiri na vibration.
E nwere ụdị dị iche iche nke mpụga ike draịva. Nke onye ị na-eji na-ọ dịtụla mgbe ị nwetara nsogbu ọ bụla na data ọnwụ mgbe eji ya? Na ozi nyere na isiokwu a, ị na-eche na ị ga-enwe ike idozi ọ bụla data ọnwụ nsogbu ị ga-enwe n'ọdịnihu?
Biko ịkọrọ gị ọsọ ọsọ na nchegbu na anyị na anyị ga-enyere unu n'ụzọ ọ bụla anyị nwere ike.
> Resource> Draịvụ> Olee otú iji naghachi faịlụ gị mpụga ike mbanye